Fitaovam-pitaterana varimbazaha fanondranana solika - mpamatsy AASraw
Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia mampiditra ny zavamaniry voajanahary indrindra isika, toy ny Bromelain, marika mangidy, sns.
Ny bromelain dia anzima hita ao amin'ny ranom-boasary sy pineapple. Ny olona dia mampiasa izany ho fanafody.
Ny Bromelain dia ampiasaina mba hampihenana ny fiterahana (indrindra amin'ny orona sy sinus), aorian'ny fandidiana na ny ratra. Ny alikaola ihany koa dia ampiasaina amin'ny fitsaboana tsiranoka izay miteraka ratra sy fery (kolitoly mihintsana), manala ny fatin'aretina maty sy simba aorian'ny fandoroana (famoahana), ny fisorohana ny fanangonana ny rano ao amin'ny havokavoka (hodi-doko), ny hozatra misakafo, mampitombo ny fifindran'ny hozatra, mitombo ny clotting, manatsara ny fihanaky ny antibiotika, ny fisorohana ny homamiadana, ny fampihenana ny asa, ary ny fanampiana ny vatana dia manaisotra tavy.
Ampiasaina ihany koa izy io mba hisorohana ny fahantrana hozatra aorian'ny fanaovana fanatanjahantena. Nampiasaina io fampiasana io, ary ny porofo manaporofo ny bromelain dia tsy miasa amin'izany.
Ny olona sasany dia mampiasa vokatra (Phlogenzym) ho an'ny arthritis (osteoarthritis) izay mampifangaro bromelain amin'ny trypsin (proteinina) sy rutin (singa iray hita ao amin'ny buckwheat). Ny bromelain ampiasaina amin'io fomba io dia toa mampihena ny fanaintainana sy manatsara ny knee amin'ny olona voan'ny arthris.
Tsy ampy ny porofo ara-tsiansa mba hamaritana raha tsy mahomby amin'ny fampiasana ny bromelain na tsia.
Ny Bromelain dia toa miteraka ny vatana hamokarana fanafody sy fanaintainana (fanafody).
Ao Bromelain ihany koa dia misy zavatra simika izay manelingelina ny fitomboan'ny sela mpikororosy sy ny fiterahana ra.
Ny pineapple, teratany amerikana teratany ary ny ampahany amin'ny fitsaboana nentim-paharazana any Hawaii, dia iray amin'ireo loharanon-karena indrindra eto amin'ny tontolon'ny bromelain. Izy io dia ahitana endopeptidase maro sy ny vovoka toy ny phosphatase, glucosidase, peroxidase, cellulase, proteinina sy protease fanafody. Amin'ny ankapobeny, ny "bromelain" dia mivarotra amin'ny fitrandrahana na ny fanafody dia manondro ireo biby masira naterina amin'ny pineapple na ny paozika fa tsy avy amin'ny nofo.
Nampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana voajanahary ny fitsaboana ny zava-drehetra amin'ny alahelon'ny tsy fahampian-tsakafo, ny anana dia tsy vitan'ny fimenomenona ihany fa vitamin C, vitamin B1, potassium, manganese ary phytonutrients. Raha manana tombony maro ny anana, ny tena zava-miafina amin'ny hery manasitranany dia tena bromelain.
Inona no atao hoe bromelain? Ao amin'ny tontolo ara-pahasalamana, io fikambanana mahavariana io dia nampiasaina ho fitaovam-piadiana mahery vaika manohitra ny fanafody sy mpanohitra. Ny fikarohana dia naneho koa fa manana fibrinolytika, antitematous ary antitrobotika ny fananana, midika izany fa manampy amin'ny fisorohana ny lozoka, oda ary ny fivoahana. Tamin'ny lasa, io anzima io koa dia nampiasaina ho mpihetsiketsika vy, antony mahatonga azy io hanamaivanana sy hikolokoloana tsiranoka, harefo sy hozatra. Fanampin'izany, ny fanadihadiana vao haingana dia nahita porofo fa ity enzymika ity dia manakana ny metastasisan'ny làla ao anaty làlany, izay manoro hevitra fa ny bromelain dia mety ampiasaina amin'ny fanafody marary isan-karazany, mety ho voan'ny kansera.
Ny fijerena ny literatiora momba ny siansa, izay ahitana lahatsoratra 1,600-plus momba ny tombontsoa azo avy amin'ny bromelain, dia mampiseho fa nampiasaina izy io mba hiatrehana olana maro momba ny fahasalamana, anisan'izany ny:
Tafika mifandray amin'ny tavy, toy ny ranomaso ACL
Arthritis, fanaintainana miara-miasa sy osteoarthritis
Ny olana momba ny digestive dia toy ny havokavoka na ny aretim-pivalanana
Milaza zavatra tsinay aretina
Sinasitis, toy ny bronchitis sy sinusitis
Herisetra sy fahasitranana amin'ny fahasitranana amin'ny ratra na hoditra hoditra
Mahasalama ny fanafody, indrindra fa ny antibiotika, ary ny soritr'aretina vokatry ny fanafody
Ny loko mainty, Seville orange, sauce orange, orange marinade, na marmelade orange dia manondro ny hazo citrus (Citrus × aurantium) sy ny voany. Teratany any atsimo atsinanan'i Azia izy io, ary niely tamin'ny olona maro tany amin'ny faritra maro. Ny hazo dia hita eo akaikin'ny renirano madinidinika any amin'ny faritra atsimon'i Florida sy Bahamas taorian'ny nampidirina azy tany Espaina, izay nampidirin'ny Moors tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha 10h. Ny menaka mangidy dia mividy ho fanampiny fanampiny noho ny toetran-tsainy, na dia tsy misy aza ny angona azo antoka ary tsy dia misy ifandraisany amin'ny voka-dratsiny mampidi-doza, anisan'izany ny fery sy ny aretim-po.
Maro ny karazana menaka mangidy ampiasaina amin'ny menaka iankinany, ary hita ao anaty ranomanitra, ampiasaina toy ny menaka na solvents. Ny vary varimbazaha Seville dia ampiasaina amin'ny famokarana marmelade.
Ny marika mangidy koa dia ampiasaina amin'ny fanafody mampinono toy ny fanafody mampihetsi-po sy manala baraka, noho ny zavatra mivaingana azy, synephrine. Ny tsindrin-tsakafo bitika dia mifandray amin'ny voka-dratsiny sy ny isan'ny maty, ary ny vondrona mpiriorio dia miaro ny olona tsy hampiasa ny voankazo medika. Mbola tsy voavolavola raha misy loko marevaka ny fahasalaman'ny fo sy ny taovan'ny kardia, amin'ny tenany na amin'ny endrika hafa amin'ny zavatra hafa. Ny fitaovam-pandaminana manan-danja dia navoaka mikasika ireo toetra amam-panala marevaka nataon'ny National Institute of Standards and Technology (NIST), ho an'ny voankazo voajanahary, fambolena sy fofona matevina, miaraka amin'ireo entana miray hina.